Maitiro ekugadzira uye kugamuchira mafoni kubva kune yako iPad neIOS 8 | IPhone nhau
Ipo Apple yaive ichiwedzera kushandiswa kwevhidhiyo kufona kuburikidza neFaceTime kune ese maIOS neMac zvishandiso, mafoni achiri dzaingobvumidzwa kune iyo iPhone, kusvika zvino. Izvi zvinogona kuve zvinogumbura kana, semuenzaniso, iwe wakagamuchira kufona iwe uchinge uchishanda paMac yako kana kushandisa yako iPad uye yako iPhone yaive mune imwe kamuri.
Iye zvino, neIOS 8 uye Mac OS X Yosemite, unogona kugamuchira runhare kwete chete pane yako iPhone, asiwo pane yako iPad neMac. Izvi zvinodaro iro basa nyowani rinonzi Kuenderera, uye zvinobatsira chero bedzi zvishandiso zvese zvakabatana kune imwecheteyo netiweki yeWi-Fi uye yakafanana iCloud account.
Maitiro ekugadzira uye kugamuchira mafoni kubva kuPad, iPod touch kana Mac uchishandisa yako iPhone
-Vhura iyo application Zvirongwa, enda kuchikamu ICloud uye chengetedza kuti zvese zvishandiso zvako zvakabatana neiyo imwechete iCloud account.
-Dzokera kumakona makuru ekuona uye pinda chikamu FaceTime. Ita shuwa sarudzo Kufona iPhone zvakabatana kune zvese zvako iPad uye yako iPhone.
-Gadzirai maviri madhijitari ku imwechete network yeWi-Fi.
-Iye zvino unogona kuvhura iwo ekushandisa maficha eiyo iPad yako, tinya chero kuonana uye iko kufona kuchaitwa.
-Ichi chiito chinotanga chirongwa chakafanana nechitarisiko kune iyo iPhone uye ichakuzivisa iwe kuti urikufona kubva kunhare mbozha
-Uchaonawo mureza pane yako iPhone zvichiratidza kuti kufona kuri kuitwa. Ukadzvanya iyi banner, iyo foni application ichavhura uye unogona kuenderera mberi nekufona kubva pachigadzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 8 » Maitiro ekugadzira uye kugamuchira mafoni kubva kune yako iPad neIOS 8
José Carlos akadaro
Pindura José Carlos
Kana pane iyo iPad 2 inogadzira iyo feint uye inovhara
Jose Angel akadaro
Iyo yakashanda zvakakwana nemhepo yangu ipad. Ndingaite sei kuti ishande neMac? Ndatenda.
Pindura kuna Jose Angel
Kuti uzviite paMac iwe unofanirwa kumirira iyo yekupedzisira vhezheni ye OS X Yosemite kana kuisa yeruzhinji beta pane mac
Yakandishandira pandakangokwidziridza (iPad4 / iPhone5), asi ikozvino hazvichashande. Pane mhinduro pazviri here?
Hukuru. Inoshanda zvakakwana
Ndarasikirwa neipad mini 16gb, ndingaiwana sei?
Ivo vane matambudziko kana kuti hazvishande kwavari, vakagadzirisa here kana kudzoreredza? Ndeipi vhezheni yeiyo 8 yawakaisa pane zvishandiso?
Kwandiri zvakafanana zvinotaurwa nevazhinji. Dzimwe nguva anowana mafoni. uye haanditenderi kushevedza. Fake nekuvhura iyo app yefoni uye inovhara zvakare. Iwe unofunga ndinofanira kumisazve ipad?
kana ichinyatso kuvandudzwa kuenda ku8.0.2 (ini handina kudzoreredza), kana ini ndichigamuchira mafoni kana vachibuda paIpad yangu (kwete nguva dzose ichokwadi), uyezve handigone kufona kubva kuPadad.
Iwe unofunga ndinofanira kuidzorera?
Manheru akanaka Gustavo, ndakagadzirisa uye ndikadzoreredza yangu iPad. Kufona kunouya asi kana ini ndikaedza kupindura application inovhara uye hainditenderi ndipindure. Zvakare kana kuyedza kufona inotanga asi iko kushanda kunovhara uye handikwanise kufona
Mhoroi, ndine iyo iPhone 5s (yakadzoreredzwa ku8.0) uye ipad 2 (yakadzorerwa ku8.0.2). Inondishandira pasina matambudziko. Kubva pa iPhone 2 kusvika parinhasi ndakadzidza kuti kana munhu achigadzirisa - panzvimbo yekudzorera - panogara paine chimwe chinhu chisiri kushanda nemazvo. Ini ndinoratidza kuti, mushure mekuchengetedza - ini ndinofarira pa iTunes - dzosera. Ramba uchifunga kuti kudzoreredza backup kunononoka, asi ichave iri nyaya yekushivirira. Pane yangu ipad 2 ye64, izere nemaapplication uye pamuganhu wekugona, zvakanditorera zuva. Yakandipawo imwe nzvimbo. Luck
Yangu iPad 3 inongobwaira uye inodzokera kuscreen kana ichiedza kufona. Ndine Iphone 5c uye ivo vese vane yakafanana account yeIcloud.
Kushamwari ine Iphone 5 nhamba yake inoonekwa muZvirongwa, Facetime, asi kwete kwandiri.
Zviripachena chikanganiso chakakomba cheIOS 8.0.2!
PS: Ini ndatodzoreredza zvikwata zvese uye zvichiri dambudziko
Zvese zvinhu zvakakwana, chinhu chega ndechekuti handikwanise kufona kubva ipad yangu, ndinogamuchira mafoni akakwana asi handigone kuagamuchira, chichava chii?
Inoshanda zvakakwana kwandiri, iwe unongofanirwa kumisikidza Facetime pane ese mairi (iPad ne iPhone)
Na 8.1 inoshanda kare chaizvo
Uye nei uchida kutaura parunhare nemumwe munhu ari paiyo Wi-Fi senge iwe uye angangodaro matanho matatu kubva kwauri? Kupusa kupi. Uye pamusoro neakafanana iCloud account? Hukuru, iwe unogona ikozvino kutaura wega kubva ku iPhone kuenda kuPad Mahara akanaka anotonhorera.
Saka mapenzi vanhu, munogona kuona kuti hamuna iPhone mune nharembozha iyo inoshandiswa chete kufonera, izvo zvamunoti hakusi iko kushandiswa kunopihwa, kana ukatambira nhare pane yako iPhone uye uripo yako iPad, unogona kupindura kubva kuPadad usina kuenda kunotsvaga iyo iPhone yauinayo patafura kana kumwe kunhu, uye mafoni aunogamuchira haafanire kunge ari paWi-Fi, iyo iPad uye iPhone iwe unofanirwa kuve uri imwecheteyo netiweki yeWi-Fi kuti ikwanise kuita iro basa, haha ​​iye munhu wemoron.
Kuongorora kwekuita, CPU neGPU, uye hupenyu hwebhatiri reiyo iPhone 6
Iwe haufarire kuti iyo iPhone 6 kamera inonamira kunze? Iwe unogona kugara uchijecha